I-China i-Tiey yentsimbi engenasici zezona zixhobo zibalulekileyo zokuhamba ngokuKhuselekileyo kweenqanawa zokuVumba kunye noMzi mveliso UDaren
Kwinqanawa ehamba ngenqanawa, zonke zikuluhlu olupheleleyo lwezincedisi, zilungele ukuhamba ngokukhuselekileyo. Izixhobo ezininzi zenqanawa, kubandakanya neentsimbi zentsimbi zentsimbi zentsimbi, nangona zincinci, zincinci, lukhuseleko lwenqanawe kubalulekile kuhambo. Kutheni usithi ukubaluleka kwezi ndawo zibonakala zincinci ukuba zithunyelwe? Masithethe:
Njengoko kwaziwa kubo bonke, kwiindawo eziselunxwemeni ezisempuma e-China, amazibuko amaninzi, kunye nophuhliso lwezorhwebo lwamazwe aphesheya, inqanaba lokusetyenziswa kwenqanawa liphezulu kakhulu, elenza ukuba izinga lokusetyenziswa kwentsimbi yentsimbi engenasici inyuke kakhulu, sinokuthi akukho nqanawa ngaphandle . Ngokusebenzisa intambo yolwandle engenantambo yentsimbi, inokuvumela inqanawa ukuba ihambe ngokukhuselekileyo, kuba la malungu mancinci angasetyenziselwa ukubopha, ukuqinisa, ukulungisa.
Kuhambo, ubunzima benqanawa ngokwabo bunzima kakhulu, babungcangcazela ngenxa yemozulu. Ukuba ngeli xesha akukho ntambo yaselwandle yentsimbi engenazingcingo enokuhambisa iinxalenye kwindawo yoqobo, zikhokelele ekuthumeleni iinxalenye zikhululeke nokuba zivutheleke ekubalekeni, oku kuya kunika inqanawa ukuba ibe yingozi, kodwa ukuba kukho intambo yolwandle engenantambo yentsimbi, emva koko yenza izinto ezifanelekileyo, ezivela emoyeni nasemvuleni, vumela ukuhamba kakuhle kwenqanawa.
Kwintengiso uninzi lwentambo yentambo yaselwandle eneentsimbi ezingenasici 304 l intsimbi engenasici, i-316 l intsimbi engenasici kunye nezinye iicarbon ezincinci zentsimbi. Kutheni usebenzisa izinto zentsimbi? Okanye i-carbon ephantsi ye-austenitic insimbi engenasici?
Sonke siyazi ukuba i-stainless steel ine-anti-ukuguga, ukumelana ne-corrosion, iqondo lobushushu elisezantsi, akukho lula ukurusa, njalo njalo, kwaye i-304 l intsimbi engenasici kunye ne-316 l intsimbi engenazintsimbi inokuzisa ukumelana nokubola komgangatho wolwandle ion (medium), kulula ukuqhubekeka sukube, akuyi kubakho ukubola kwe-intercrystalline emva kokuwelda kuzisa ingxaki efihliweyo. Ke sikhethe i-304 l i-stainless steel kunye ne-316 l ye-stainless steel tie tie ifanelekile
Zininzi izibonelelo ezibekwe kuLwandle ngentsimbi engenasici kunye, kunye nokubopha ngokulula, ukubopha okuqinileyo, kungoko kungekuko kuphela ukusetyenziswa kwayo kwinqanawa, kunokusetyenziswa nakwipetrokhemical, iqonga leoyile, ukwakha, ukuthuthwa, imibhobho, ubushushu ulondolozo, ucingo kunye nentambo, intambo yebhulorho, izixhobo zonxibelelwano, imiqondiso, ezolimo, ezothutho, ukuvelisa oomatshini, amandla ombane, izixhobo zombane, imveliso yezemveliso, izixhobo zonyango, indawo yokuvelisa umbane, izityalo zobisi, ishishini leekhemikhali, iinqwelomoya, uloliwe, isantya esiphezulu sikaloliwe , indlela engaphantsi, ishishini leemoto kunye nezinye iinkalo.